पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ ? काँचो मुलाको प्रयोग गर्नुस् एक महिनामै पाइल्स चट - IAUA
पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ ? काँचो मुलाको प्रयोग गर्नुस् एक महिनामै पाइल्स चट
ramkrishna November 12, 2016	पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ ? काँचो मुलाको प्रयोग गर्नुस् एक महिनामै पाइल्स चट
मुला खाँदा हुने फाइदाबारेमा तपाईलाई थाहा नै होला । तर, के तपाईलाई थाहा छ रु पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन ?
मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ । यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन ।
पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ ।
पाइल्सका रोगीहरुलाई सामान्यतः मुला खान सल्लाह दिने गरिन्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो, मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले स्टुललाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पाइल्सका भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छ । यसका साथै मुलाले चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ ।
पाइल्स रोगीले काँचो मुला सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् ।
तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यो पाउडरको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुनेछ ।
यदि तपाई बजारबाट किनेर केही पनि प्रयोग गर्न चाहनु हुन्न भने मुलाको पातलाई सुकाएर त्यसको चुर्ण बनाएर पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । एक महिना नियमित सेवन गरेपछि तपाईको मुलाप्रतिको दृष्टि नै परिवर्तन हुनेछ ।
Previous Previous post: तपाई दैनिक कति पानी पिउनु स्वास्थको लागि उपयुक्त हुन्छ ?
Next Next post: निजी घरको प्राविधिक निरीक्षण तेस्रो पक्षबाट गराइने